Ahịa Mgbasa Ozi Digitallọ Ọrụ Na-eto Eto Na-eto Eto | Martech Zone
Ahịa Mgbasa Ozi Mgbasawanye Na-eto Eto
Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 18, 2013 Monday, October 12, 2015 Douglas Karr
Anyị zutere na uru na-abaghị uru na ọfịs anyị bụ ndị mepụtara ihe dị egwu na Facebook. Agbanyeghị, mmefu ego ha kwadoro nwere naanị akara ihe maka telivishọn na radio mgbasa ozi dịka ego ha si emefu ego. Nke a bụ esemokwu na ọtụtụ ndị na-enweghị uru… ndị nduzi nwere obere ihe mgbagwoju anya ka ha na-ahazi mmefu ego dabere na enyemaka nke gbara kemgbe ọtụtụ iri afọ.
Ọ bụghị na anyị na-agbakwunye telivishọn na redio (anyị na-eme otu akụkụ radio), ọ bụ naanị na ha bụ ndị mmụọ dị oke ọnụ dị mkpa ka etinye ha nke ọma dịka akụkụ nke ngwakọta ahịa zuru ezu. Dijitalụ mgbasa ozi na-enye ọnụ ala, ohere dị elu - ọkachasị na ndị otu na-anaghị akwụ ụgwọ ebe ndị ọrụ na ndị ahịa nwere nnukwu mmụọ. Mediantanetị na-enye gị ohere iji mee ka ọkụ ahụ, ndị na-akwado gị na ndị na-eso ụzọ gị gbasaa ya. O yighị ka ọdịnala ọ bụla.
Mgbe mmadụ na-ekpughere mmadụ 3,000 ozi mgbasa ozi kwa ụbọchị, ịchọrọ ijide n'aka na ụgbọ mgbasa ozi gị ga-eduga gị na ịchọrọ nke ịchọrọ. Easentanetị ịdị mfe nke ụzọ emeela ka ọnụ ụzọ ọchụchọ dị ukwuu maka ndị ahịa chọrọ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị. N'elu imegide ego nke mgbasa ozi Ntanetị na uru ya, ọ dị mfe ịhụ ihe kpatara na nke a abụghị ahịa ileghara anya.
The see okwu n'elu na infographic n'okpuru site na Advice Interactive Group bụ nyocha zuru ezu banyere uto nke ahịa dijitalụ karịa oge gbasara mgbasa ozi ọdịnala.
Oge ejiri oge ahụmịhe onye ọrụ na ahịa dị elu
WeVideo: Edezi vidiyo na ntanetị
Aug 30, 2013 na 3: 40 AM
Ndewo Douglas, daalụ maka ngosi. Ekwenyere m karịsịa na ndị na-eri ihe na-etinye vidiyo vidiyo dijitalụ na ndụ ha kwa ụbọchị, n'agbanyeghị na ha nwere ike ọ gaghị anọ na sofas ha iji mezuo mkpa a. Ọtụtụ na-ekiri vidio na mbadamba na ngwaọrụ mkpanaka, ebe ọ bụla na ebe niile. Ọ bụrụ na ebumnuche anyị n'ezie iji jikọta ndị ahịa a, mgbe ahụ ọ bụ ihe amamihe dị na ndị na-ere ahịa ịmụta na ijikwa mgbasa ozi vidiyo dijitalụ.
Aug 30, 2013 na 7: 16 AM
Nnukwu ihe @jin_kaz: disqus! O juru m anya na ụlọ ọrụ ndị na-akwụ ụgwọ mgbasa ozi mana akwụghị ụgwọ mgbasa ozi vidiyo na nke ahụ.